Ogaden News Agency (ONA) – Baarlamaanka Maraykanka oo Dhagaystay Qaraar Itoobiya Kadhan Ah.
Baarlamaanka Maraykanka oo Dhagaystay Qaraar Itoobiya Kadhan Ah.
Baarlamaanka wadanka Maraykanka ayaa maalin nimadii shalay magaalada Washigton DC kuqabtay dhagaysi ay dad aad ubadan kasoo qayb galeen oo lagu dhagaysanayay xaalada kasii daraysa ee wadanka gumaysiga Itoobiya.
Dhagaysigan oo lagu qabtay guriga baarlamaanka ee magaalada Washington ee xarunta wadanka Maraykanka ayay kasoo qayb galeen dad aad ufarabadan oo isugu jira baarlamaanka Maraykanka qaybihiisa kala duwan iyo mas’uuliyiin kale.
Xubnaha baarlamaanka iyo mas’uuliyiinta kale ayaa dhagaystay qaraar tirsigiisu ahaa HR128 oo ay soo diyaariyeen xubno katirsan baarlamaanka Maraykanka, kaas oo looga gol lahaa in ay baarlamaanku dhagaystaan xaalada Itoobiya kadibna ay u codeeyaan.
Dhagaysigii shalay ayaa inta badan lagaga hadlay xasuuq yadii ugu dambeeyay ee Itoobiya kadhacay todobaadkan iyo waliba xasuuqii isdaba jooga ahaa ee bilihii iyo sanadihii lasoo dhaafay kasocday wadanka Itoobiya.
Xubnaha qaraarkan soodiyaariyay ayaa sheegay in dowlada Maraykanka looga baahan yahay xaaladaha bini’aadam nimo iyo kuwa amaan ee sii xumaanaya ee wadanka Itoobiya kajira, arintaas oo sida ay xubnaha qaraarka soodiyaariyay kusheegeen mid ay dowlada Maraykanku kagaabisay.
Dowlada Maraykanka ayaa xukuumada wayaanaha siisa malaayiin lacag ah taas oo sida laxaqiijiyay ku dhacda gacanta dad kooban oo saraakiil ah, isla markaana loo isticmaalo waxyeelada shacabka aan isdifaaci karin.
Dhinaca kale Qaramada Midoobay QM ayaa xukuumada wayaanaha ka codsatay in ay joojiso xasuuqa wadanka kasocda isla markaana ay ilaaliso xuquuqda aadamaha, lamana filayo in ay Itoobiya warkaas dhag jalaq usiin doonto.